Kugadziriswa kweMakomputa, Hardware & Software - Komputa Kuvandudza Zvidzoreso
Makomputa anoda kugara achigadziridzwa, kugadzirisa, kukwidziridzwa uye dzimwe nguva kugadzirisa zvakare.
Kugara uchigadzirisa macomputer zvinoreva kuona kuti komputa iri kushanda mushe, kubvisa zvikanganiso, kumhanyisa, kuchengetedza komputa yako kuenderana uye yakachengetedzwa zvakakwana. Kuchengeta kukwidziridzwa kwetekinoroji mupfungwa, komputa inoda kugara ichivandudzwa uye kukwidziridzwa. Izvi zvinoreva, kamwechete kwechinguva iwe uchafanirwa kukwidziridza software uye Hardware yekombuta yako.
Isu tinokupa iwe runyorwa rwevashandi vanogona kukubatsira iwe nekugadzirisa komputa uye kugadzirisa.
Kukwidziridzwa kwesoftware kunosanganisira kuvandudza antivirus, windows, vatambi venhau, madhiraivha, nezvimwe. yakakwidziridzwa neyakanakisa software uye Hardware inovimbisa kushanda kwakakodzera uye chengetedzo.
Kunyangwe vanhu vachifunga zvekubvisa matambudziko kana kugadzirisa zvikanganiso vari vega, asi zvinokurudzirwa kuhaya nyanzvi yekupa rubatsiro kumakomputa kuti ave nechokwadi chekuti zvese zviri kushanda mushe uye iwe une masevhisi akanakisa.
Desktop & Laptop Makomputa
Repair, Upgrades, Updates
Chii chinonzi Computer?
Komputa mudziyo unoshandiswa kuita maitiro akasiyana siyana. Makomputa anowanikwa mumhando dzakasiyana uye anoshandiswa kuita mabasa akasiyana anobatsira kuchengetedza nguva nemari. Pane zvakawanda zve software zviripo zvinobatsira kugadzirisa akasiyana mabasa zvakanaka.
Iyo software inowanzo kunzi maapplication, ayo anoita mabasa otomatiki uye anoita kuti maitiro acho ave nyore kwazvo. Izvi zvinoita manejimendi zvive nyore kwazvo.
Tsvaga Vamwe Vanopa Kutsvaga
Dhairekitori zvinyorwa zvekutsvaga zvinoita kuti iwe uwane runyorwa rwevashandi vanokubatsira iwe nekugadzirisa komputa yako Hardware uye software. Ivo vanozokubatsira iwe nezvinodiwa madhiraivha uye software izvo zvinoona nemazvo kushanda kwekombuta yako.
Yedu komputa yekugadzirisa sevhisi kunosanganisira vese vemuno nevepamhepo nyanzvi dzinogona kukubatsira iwe neese makuru kana madiki madambudziko nekombuta yako Ivo havangokupe chete kubvunza asi zvakare vanokupa iwe nekugadzirisa uye kusimudzira masevhisi zvinoenderana nezvaunoda.
Iwe une sarudzo yekumisikidza vanopa sevhisi nenharaunda uye iwe unogona kushandisa sarudzo kusarudza muridzi wekomputa yekugadzirisa bhizinesi vanopa munzvimbo yako.
Kana paine nyaya nekombuta Hardware zvinokonzeresa matambudziko nayo mutyairi uye software. Kuwedzera nyowani nyowani, software senge hombe dhiraivha, graphic makadhi kana memori makadhi ekumhanyisa makomputa kana bhuku rezvinongedzo Hardware richidikanwa mune mamwe maapuro ekuvandudza.
Kuchengeta komputa yako kukwidziridzwa neazvino software uye Hardware chave chinhu chinodiwa, kunyanya kana zvese zvikagadziriswa Kuwana nyowani uye inovandudzwa Hardware nesoftware yakaita giraidhi kadhi, hard drive, windows nezvimwe zvinobvumidza kubata kwakakodzera kwemabasa uye maitiro mushe.
Computer Software Kugadzirisa
Computer Software Ndiwedzere